Raw 17-Methyltestosterone Soo-saareyaasha Alaabada & Shirkadaha - Warshadaha
Alaabada daroogada ee daawada ee warshadaha iyo hay'adaha
Xashiishka 17-Methyltestosterone (58-18-4)
(1 dib u eegista macaamiisha)
Kalluunka Root 17-Methyltestosterone waa mid ka mid ah sterids-ka ugu da'da badan ee la heli karo, kuwaas oo daaweyn kara maqnaanshaha testosterone ragga, iyo daaweynta kansarka naasaha haweenka postmenopausal. Waxay u shaqeysaa iyada oo saameeysa habab badan oo jirka ah si jidhku u kobciyo oo u shaqeeyo si caadi ah.
Unugga: 25kg / Drum
Dib u eegida (1)
Qalabka Root 17-Methyltestosterone (58-18-4) video
Root 17-Methyltestosterone (58-18-4) Sharaxaad
Daawada Raw 17-Methyltestosterone waa macmacaanka firfircoon ee firfircoon ee firfircoon ee firfircoon (oralogenic and androgenic steroid) (AAS) kaas oo loo isticmaalo daaweynta yaraanta iyo quudinta ee ragga iyo dhowr waxyaalood oo kale. Si loo daahiyo qaangaarka wiilasha, qiyaasaha hoose ee qayb ahaan ee daaweynta hormoonka menopausal ee loogu talagalay calaamadaha menopausal sida nabarada kuleylka, osteoporosis, iyo rabitaanka galmada ee haweenka, iyo in lagu daaweeyo kansarka naasaha dumarka.
Kalluunka Root 17-Methyltestosterone sidoo kale waa cirbadeynta xasaasiyadeed ee asteegtada ah ee loo yaqaan 'synthetic androgen. Dufanka 17-Methyltestosterone, oo la jaanqaadaya testosterone, waxay ku xidhan tahay resiters cytosolic androgen, iyo naqshadeynta nucubyada dambe ee isku dhafka ligand-receptor ayaa soo jiidanaya curin-gelinta gawaarida ee gen-ka jawaab celinta. Waxyaabaha hiddesayaasha ayaa masuul ka ah kobaca caadiga ah iyo horumarinta xubnaha galmada ragga iyo astaamaha jinsiga. Wakiilka waxaa kale oo uu keenaa sii-hayaha nitrogen, sodium, potassium, fosfooraska, iyo sidoo kale kalsiyum.
Xashiishka 17-Methyltestosterone (58-18-4) Smamnuucista
Product Name Kalluunka Root 17-Methyltestosterone
Magaca Kiimikada RU-24400;NSC-9701;17α-Methyltestosterone; 17α-Methylandrost-4-en-17β-ol-3-one
Fasalka Daroogada Androgen; Steroid anabolic
Molecular Wsideed 302.45
Monoisotopic Mass 302.225 g / mol.l
barafku Psaliid 162-168 ° C (iftiin)
Karkarinta: 383.47 ° C (qiyaasta adag)
Biological Life-Life qiyaastii saacadaha 3 (saacadaha 2.5-3.5)
Application Isticmaalka Caafimaadka: Methyltestosterone waxaa loo isticmaalaa ama loo isticmaalaa daaweynta qaan-celinta daahirsan, hypogonadism, cryptorchidism, iyo erectile disfunction ee ragga, iyo qiyaas yar oo lagu daaweeyo calaamadaha menopausal (gaar ahaan osteoporosis, nalalka kulul, iyo kordhinta libido iyo tamarta) xanuunka naas-nuujinta ka dib iyo qallayl, iyo kansarka naasaha dumarka
Waa maxay budada Xaydh-Methyltestosterone (17-58-18)?
17-Methyltestosterone, derajada synthetic ee testosterone, waa daawada steroids iyo anabolic (AAS). Waxaa badanaa loo isticmaalaa daaweynta heerarka testosterone-ka ee ragga, da'da yar ee qiyaasta yar, sida qayb ka mid ah daaweynta hormoonnada menopausal ee loogu talagalay calaamadaha menopausal sida kuleylka kulul, osteoporosis, iyo rabitaanka galmada ee haweenka, iyo in lagu daweeyo kansarka naasaha haweenka (1-3). Waxay u muuqataa sida crystals white ama cream cream ama budada, taas oo lagu xaliyo waxyaabo dabiici ah oo kala duwan oo dabiiciga ah laakiin waa ficil ahaan loola dhaqmo biyo. Waa in loo hoggaansamo maamulka afka.
Methyltestosterone ayaa markii ugu horreysay laga helay 1935 waxaana loo soo bandhigay isticmaalka caafimaadka ee 1936. Waxaa la soo saarey wax yar ka dib markii laga helay baadhitaanka testosterone, oo ah mid ka mid ah daroogooyinka ugu horreeya ee AAS. 17-Methyltestosterone, oo ka baxsan howlaha caafimaadka, ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa si kor loogu qaado jirka iyo waxqabadka.
Sida ay u shaqeeyaan budada 17-Methyltestosterone (58-18-4)
17-Methyltestosterone wuxuu saameyn ku yeeshaa laba habab oo muhiim ah: kicinta xajiyaha iyo xajmiga (iyo DHT), iyo isbedelka estradiol iyo dhaqdhaqaaqa qaar ka mid ah qaboojiyeyaasha estrogen.
17-Methyltestosterone wuxuu geli karaa unugyada unugyada unugyada unugyada unugyada unugyada unugyada unugyada unugyada unugyada unugyada unugyada unugyada unugyada jidhka. DHT waxay ku xidhan tahay wejiga isla markaasna xitaa si xoogan, uuna awood u yeesho xitaa awood xoogan oo quwad leh. Qalitaanka T-reseptor ama DHT-reseptor waxaa ku jira isbedel qaab-dhismeed kaas oo u oggolaanaya inuu u wareego nudleuska unugyada iyo inuu si toos ah ugu xiro taxanaha qaaska ah ee nucleotide ee DNA-da chromosomal, oo loo yaqaan 'elements of response hormone' (HRE). Nidaamkani wuxuu xakameynayaa dhaqdhaqaaqa isdabajooga ee gen ee kala duwan, oo soo saara saameynaha koritaanka cuncunka.
Dufanka 17-Methyltestosterone (58-18-4) Qiyaasta
17-Methyltestosterone waxaa loo maamulaa hadal ahaan. Qiyaasta la soo jeediyey way kala duwan tahay iyadoo ku xiran da'da, jinsiga, iyo ogaanshaha bukaanka shakhsi ahaaneed. Qiyaasta daawada waa la hagaajiyaa iyadoo la eegayo jawaabta bukaanka iyo muuqaalka dareen-celinta xun. Daaweynta baddalidda ee ragga iyo dumarka aan caadi ahayn waxay badanaa dalbanayaan 10 oo ah 50 mg mg 17-Methyltestosterone maalin kasta. Si kastaba ha noqotee, da'da taariikheed iyo taariikhda qallalka ah waa in la tixgeliyaa labadaba si loo go'aamiyo qiyaasta bilowga ah iyo hagaajinta qiyaasta. Qiyaasaha loo isticmaalo daaweynta qaan-celinta daahitaanku guud ahaan waxay ku jirtaa qaybta hoose ee kor ku xusan, iyo muddada kooban, tusaale ahaan 4 ilaa bilaha 6. Daaweynta dumarka naasaha, qiyaasta 17-Methyltestosterone ee dheddiguhu waa laga bilaabo 50-200 mg maalin kasta.
Xashiishka 17-Methyltestosterone (58-18-4) Faa'iidooyinka
Daawada 17-Methyltestosterone waxay daaweyn kartaa calaamadaha kala duwan sida hypogonadism, cryptorchidism, qaangaarka oo dib loo dhigo, iyo xinjiraha erectile ee ragga, iyo qiyaas yar oo lagu daaweeyo calaamadaha menopausal (gaar ahaan osteoporosis, nabar kulul, iyo kordhinta libido iyo tamarta), xanuunka postpartum iyo qadhaadh.
Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa dumarka si loo daaweeyo kansarka naasaha, bararka uurka, iyo weliba dheecaanka estrogen ee lagu daaweyn karo calaamadaha menopause. Waxaa sidoo kale loo isticmaalay in lagu daro estrogen estrogens oo lagu daaweynayo astaamo dhexdhexaad ah iyo kuwo daran oo loo yaqaan 'vasomotor' oo la xidhiidha xinjirrada dumarka.
Ka iibso budada 17-Methyltestosterone (58-18-4) Buhias.com
Wadashaqeyn nala soo xiriir, waxaan sameyn karnaa ugu yaraan:
1. Alaabooyinkeena waxaa lagu soo saaraa cGMP oo tayada ayaa la socon karaa.
2. Nadiifnimada waa la hubin karaa wax ka yar 98%. COA; HPLC; Warbixinnada baaritaanka HNMR waa la bixin karaa.
3. Awoodahayaga awooda waa mid aad u xasilloon, isla markaana si joogta ah u samee wax soo saar.
4. Waxaan leenahay waayo-aragnimo hodan u ah adeega suuqyada sare ee adduunka oo idil.
5. Si toos ah ula shaqee warshadeenna, waxaad yareyn kartaa kharashkaaga.
Faallo ama Fariin *
Tilmaamaha ugu Habboon ee Methyltestosterone loogu talagalay Jimicsiga
Stan, KB, Douglas, SM, Farshaxanka La Isticmaalay, Endocrinology, 2011
Basaria, S., Nguyen, T., Rosenson, RS, Dobs, AS, Saamaynta Methane Testosterone Maamulka on Viscosity ee Haweenka Postmenopausal, Qoraallada PubMed, Online, 2002
Rogerio, AL, Menopause iyo gabowga, Dib-u-dhiska taranka ee "Yen & Jaffe" (Qaybta toddobaad), 2014
Christopher, JL, Meg, EB, Ann, SC, Saamaynta 17α-methyltestosterone, Methandrostenolone, iyo Nandrolone Decanoate ee Rugta Estrous Cycle, Physiology iyo Habdhaqanka, 1997
William, Llewellyn., Nafaqada Maaddooyinka, Anabolics,2009
Kickman, AT, Pharmacology of Anabolic Steroids, British Journal of Pharmacology, PMC 2439524, Online, 2018
dib u eegis 1 waayo, Xashiishka 17-Methyltestosterone (58-18-4)
Sheyga RAW 17-METHYLTESTOSTERONE waa mid aad u faa'iido leh.
Ku dar dib u eegis Cancel reply
Your Rating Rate ... Eebaha Good Celceliska Ma aha in xun Si aad Si xun
Baadhitaanka Root Testone Cypionate (58-20-8)
Dufanka Turinabol (Tbol) budada (855-19-6)
Root Sustanon budada 250
Biyaha tijaabada ah ee tijaabada ah (58-22-0)
Hengfei Biological, laga helo 2008, waa shirkad sare oo tayo sare leh oo ku takhasusay daawooyinka kiimikada ee isku dhafka wax soo saar, R & D iyo iibka.
Hagaha kama dambaysta ah ee Trestolone Acetate (MENT) ee Dhisidda Jirka
Wax kasta oo ay tahay inaad ka ogaatid waxyaabaha ku saabsan Tadalafil
Wax kasta oo ay tahay inaad ka ogaatid waxyaabaha ku saabsan Pregabalin
Testosterone phenylpropionate: Waxkasta oo Jir dhiska u baahan yahay inuu ogaado
Galbeedka Yucheng Station, Yucheng Town, Degmada Licheng, Luohe City, Gobolka Henan Shiinaha